Zvemagariro - Kubudirira Kusingaenzanisike? | Martech Zone
Chipiri, May 22, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Iyi graphic inotarisa pane zvitsva zvidzidzo kubva KuMarketer, Hubspot, uye Social Media Nhasi pakuisa ROI inogona kuyerwa kune vezvenhau kuedza.
Kubva paPagemodo infographic, Kubudirira Kusingaenzaniswi: Mumakore mashoma apfuura, mabhizinesi madiki nediki akakurisa kushandura kushambadzira kwavo kuita vezvenhau, vachigutsikana kuti kujoina chinzvimbo kunounza mari inodzoreka Kudzoka paInvestment (ROI). Muchokwadi, iyo ROI yemagariro enhau - kusiyana nedzimwe nzira dzekutengesa - inoyerwa nekukanganisa kwainoita, panzvimbo yekudzoka kwemari. Gore rino, vatengesi vanovimbisa kununura ese ari maviri. Isu tinoona kana iyo nguva yeiyo chaiyo inogona kuyerwa ROI mumasocial media iri pano.
Ini ndinotenda iyo ROI mumasocial media inogona kutopimwa, asi zvinoitwa mumatanho akati wandei. Panogona kuve nekushandurwa kwekukurumidza, zvisina kunangana kushandurwa kubva kune vateveri uye vateveri vezvigadzirwa, pamusoro pekushandurwa kubva kurudziro yenguva refu uye chiremera chinogadzirwa nekufamba kwenguva. Hazvisi nyore kutora madhora ese akawanikwa nehurongwa hwemagariro, asi iwe unogona kuteedzera zvakakwana kuratidza kudzoka kwakanaka pane iyo investa.
May 23, 2012 pa 10: 29 AM
Bhizinesi rega rega rine zvinangwa zvakasiyana zvemagariro enhau saka hazvigoneke kuona saizi imwe inokodzera hurongwa hwese hweRII. Mamwe mabhizinesi akanyanya kunetsekana nekubatana asi vamwe vari kunetseka nekutendeuka.